Satechi anoshamisika zvakare. Chaja yakakosha kwazvo yeApple Watch | Ndinobva mac
Satechi anoshamisika zvakare. Chaja yakakosha kwazvo yeApple Watch
Satechi yagara ichizivikanwa nekutangisa a zvemhando yepamusoro zvigadzirwa y nguva dzose Apple inosimbiswa. Nenzira iyi kushandiswa kwayo nemaApple zvishandiso kunovimbiswa. Ino nguva yakaparura charger yeApple Watch iyo yakabatana zvakanyanya neiyo itsva ecosystem yeiyo iPad Pro.Iinouya ne USB-C charger uye inotora mukana weiyo iPad tekinoroji yekuchaja.
Sezvo iwe ungatoziva kare, iyo iPad Pro inokwanisa kuchaja iyo iPhone kuburikidza neiyo USB-C chiteshi, saka, Wadii kushandisa tekinoroji iyi kune mamwe maApple maapplication?
iPad Pro uye Apple Watch, ikozvino yakabatana kupfuura nakare kose nekuda kwaSatechi
Iyo Apple Watch ndiyo yekutanga Apple chishandiso isina waya yekuchaja uye kubvira ipapo mabheseni mazhinji akabuda kuzokwanisa kuchaja iyo Apple Inotakurika. Asi iyi yatinokuunzira nhasi, inoshandura iyo yekuchaja system yeiyo wachi zvishoma. Ichokwadi kuti patova nechaja USB-C yeApple Watch, asi Aive Satechi aifunga kuti zvingave zvakanaka kushandisa tekinoroji yeiyo Pro Pro.
Ndiro rakagadzirwa nzvimbo grey aruminiyamu uye Inoita $ 44.99 muUnited States. Nekuve ne USB-C inogona kuve yakabatana neiyo Pro Pro iwe uchishandisa iyo Smart Keyboard Folio. Unogona kuchaja wachi uye kuona nguva, Kutenda kune iyo wachi yemubhedha nzira. Satechi inosanganisira ipfupi USB-C yechirume kune yevakadzi tambo mubhokisi yemamiriro ezvinhu iwe ausingade kuti charger ibatanidzwe zvakananga kune chishandiso, senge MacBook Pro, iko kwaizovharira mamwe ma USB-C madoko.
Saka yakakosha kune avo vanofamba kazhinji uye havafanirwe kutakura chajaja yekutanga iyo Apple inopa. Tinotarisira kuti ichakurumidza kutengeswa kuSpain, semamwe madhijitari ekambani iyo yakatotanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Satechi anoshamisika zvakare. Chaja yakakosha kwazvo yeApple Watch
Mac Pro yakaungana muChina, kupokana kweApple Watch uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Sudio Tolv R, inonakidza yakaderera mutengo mu-nzeve mahedhifoni